“ငါ့ကို တော်တော် အရှက်ခွဲတယ်၊ မင်းတို့ ညီအစ်ကို နှစ်ယောက် ငါ နဲ့လည်း ဘာမှမတော်ဘူး၊ ငါ့ အိမ်လာစရာလည်း မလိုဘူး “ လို့ကျော်ဟိန်း ပြောတာ ခံခဲ့ရဘူးတဲ့ သားညီ - MDY News
“ငါ့ကို တော်တော် အရှက်ခွဲတယ်၊ မင်းတို့ ညီအစ်ကို နှစ်ယောက် ငါ နဲ့လည်း ဘာမှမတော်ဘူး၊ ငါ့ အိမ်လာစရာလည်း မလိုဘူး “ လို့ကျော်ဟိန်း ပြောတာ ခံခဲ့ရဘူးတဲ့ သားညီ
August 1, 2020 Aung Lay Cele News 0
သရုပ်ဆောင် ၊ ဒါရိုက်တာ တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ သားညီကတော့ ကွယ်လွန် သွားရှာပြီဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင် ဒွေး ရဲ့ ညီအရင်းဖြစ်သလို ကွယ်လွန်သူ ဦးကျော်ဟိန်း ရဲ့ တူတော်စပ်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ လက်ရှိအချိန်အထိ အနုပညာ လောကထဲ ရပ်တည်နေနိုင်တာဟာ အကိုဖြစ်သူ နဲ့ ဦးလေးဖြစ်သူတို့ကြောင့်လို့လည်း သားညီကဆိုပါတယ်။
“ ဦးကျော်ဟိန်းက အနုပညာနဲ့ ပတ်သက်လာရင် တူတွေ၊ သားတွေ မရှိဘူး။ အရမ်းလည်း စည်းကမ်းကြီးတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့လည်း မတည့်ဘူး ဘာကြောင့်လဲဆို ကိုယ်က ဘုကလန့်လေ။ အမှတ်တရလေးတစ်ခုရှိတယ် သူက နင်တဲ့ ငါ့ကို ကျေးဇူးမတင်ဘူးလားတဲ့၊ ငါက မင်းကို ဒီလောကထဲ ခေါ်လာတာလေ ဆိုတော့ သားရိုက်ချင်တယ်လို့ ပြောတာမှ မဟုတ်တာ ဦးကျော်ဘာသာ ဦးကျော် ခေါ်တာဆိုပြီး ပြန်ပြောခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် ချစ်တာတော့ အရမ်းချစ်ပါတယ်။အစ်ကို့ကြောင့်၊ ဦးကျော်ကြောင့် ဒီလောကထဲမှာ အခုချိန်ထိ ရပ်တည်နေနိုင်တာပါ” လို့ သူကဆိုပါတယ်။
အနုပညာအလုပ်တွေ စလုပ်ချိန်က ဒုတိယမြောက် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ ဦးကျော်ဟိန်းနဲ့ အတူတွဲ သရုပ်ဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ငိုရတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းကို သရုပ်မဆောင် တတ်တဲ့ သူ့အတွက် ဦးကျော်ဟိန်းက ငိုတတ်အောင်သင်ပေးခဲ့ပုံကိုလည်း အခုလို ပြောပြလာခဲ့တာပါ။
“ ကျွန်တော် နဲ့ ဦးကျော်ရဲ့ အမှတ်တရ ဇာတ်ကားကသန်လျင်မှာရိုက်တုန်းကပေါ့။ ဇာတ်ဝင်ခန်းက ဘာလဲ ဆိုတော့ ဦးကျော်ဟိန်းကို ကလဲ့စားချေဖို့ဆိုပြီးတော့ အဖေနဲ့ အစ်မရဲ့ မြေပုံမှာ သစ္စာသွားဆိုတာ။ငိုတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းရိုက်တာပေါ့ အဲဒီမှာကိုယ်က ဒုတိယမြောက် ဇာတ်ကားဆိုတော့ ငိုလည်းမငို မျက်ရည်လည်း မကျတတ်ဆိုတော့ ဦးကျော်ဟိန်းက ကျွန်တော့်ကို မင်းတော်တော် ရှက်ဖို့ကောင်းတာပဲတဲ့။ ငါ့ကို တော်တော် အရှက်ခွဲတယ်၊ မင်းတို့ ညီအစ်ကို နှစ်ယောက် ငါနဲ့လည်း ဘာမှ မတော်ဘူး၊ ငါ့ အိမ်လာစရာလည်း မလိုဘူး၊ ငါ့ကို အရှက် ခွဲရက်တယ် ဆိုပြီးတော့ သူ စီးတဲ့ ဖိနပ်နဲ့ ကျွန်တော့် ပါးကိုရိုက်တယ်။ကျွန်တော်လည်း ရှိုက်ကြီးတငင်ငို၊ အဲဒီလူကြီးကိုသတ်မယ် ဆိုပြီးတော့ သချိုင်းမြေကိုလည်း လက်သီးတွေနဲ့ထိုး လက်တွေလည်းပေါက်ပြဲနေတာပဲ။ သူလိုချင်တဲ့ Mood လည်း ရလည်းရရော ကဒ် ဆိုပြီးဖြစ်ရော။ အဲဒီမှာ ကျွန်တော့် ပုခုံးကို လာဖက်ပြီး မင်းတော်သားပဲ ဘာညာနဲ့ပေါ့ ခုနက စိတ်ဆိုးထားတာက စိတ်ပဲ ဆက်ဆိုးရမလိုလို၊ဂုဏ်ပဲ ယူနေရမလိုလို” ဆိုပြီးတော့ သဘောကျရယ်မောရင်း ပြောပြလာပါတယ်။
ကိုသားညီကတော့ သူနဲ့ ဦးကျော်ဟိန်း အကိုဖြစ်သူဒွေးတို့နဲ့ အမှတ်တရတွေကို ပြန်ပြောင်းပြောပြထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအချိန်မှာတော့ သားညီဟာ ဒါရိုက်တာအလုပ်ကိုဇောက်ချလုပ်ကိုင်ပြီး အကိုဖြစ်သူနဲ့ ဦးလေးဖြစ်သူရဲ့ ခြေရာကို နင်းနိုင်အောင် ကြိုးစားနေတယ်လို့ သိရပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ….
သ႐ုပ္ေဆာင္ ၊ ဒါ႐ိုက္တာ တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ သားညီကေတာ့ ကြယ္လြန္ သြားရွာၿပီျဖစ္တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေဒြး ရဲ႕ ညီအရင္းျဖစ္သလို ကြယ္လြန္သူ ဦးေက်ာ္ဟိန္း ရဲ႕ တူေတာ္စပ္သူလည္းျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အႏုပညာ ေလာကထဲ ရပ္တည္ေနႏိုင္တာဟာ အကိုျဖစ္သူ နဲ႔ ဦးေလးျဖစ္သူတို႔ေၾကာင့္လို႔လည္း သားညီကဆိုပါတယ္။
“ ဦးေက်ာ္ဟိန္းက အႏုပညာနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ တူေတြ၊ သားေတြ မရွိဘူး။ အရမ္းလည္း စည္းကမ္းႀကီးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္နဲ႔လည္း မတည့္ဘူး ဘာေၾကာင့္လဲဆို ကိုယ္က ဘုကလန႔္ေလ။ အမွတ္တရေလးတစ္ခုရွိတယ္ သူက နင္တဲ့ ငါ့ကို ေက်းဇူးမတင္ဘူးလားတဲ့၊ ငါက မင္းကို ဒီေလာကထဲ ေခၚလာတာေလ ဆိုေတာ့ သား႐ိုက္ခ်င္တယ္လို႔ ေျပာတာမွ မဟုတ္တာ ဦးေက်ာ္ဘာသာ ဦးေက်ာ္ ေခၚတာဆိုၿပီး ျပန္ေျပာခဲ့ဖူးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခ်စ္တာေတာ့ အရမ္းခ်စ္ပါတယ္။အစ္ကို႔ေၾကာင့္၊ ဦးေက်ာ္ေၾကာင့္ ဒီေလာကထဲမွာ အခုခ်ိန္ထိ ရပ္တည္ေနႏိုင္တာပါ” လို႔ သူကဆိုပါတယ္။
အႏုပညာအလုပ္ေတြ စလုပ္ခ်ိန္က ဒုတိယေျမာက္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမွာ ဦးေက်ာ္ဟိန္းနဲ႔ အတူတြဲ သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့ရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ငိုရတဲ့ ဇာတ္ဝင္ခန္းကို သ႐ုပ္မေဆာင္ တတ္တဲ့ သူ႔အတြက္ ဦးေက်ာ္ဟိန္းက ငိုတတ္ေအာင္သင္ေပးခဲ့ပုံကိုလည္း အခုလို ေျပာျပလာခဲ့တာပါ။
“ ကြၽန္ေတာ္ နဲ႔ ဦးေက်ာ္ရဲ႕ အမွတ္တရ ဇာတ္ကားကသန္လ်င္မွာ႐ိုက္တုန္းကေပါ့။ ဇာတ္ဝင္ခန္းက ဘာလဲ ဆိုေတာ့ ဦးေက်ာ္ဟိန္းကို ကလဲ့စားေခ်ဖို႔ဆိုၿပီးေတာ့ အေဖနဲ႔ အစ္မရဲ႕ ေျမပုံမွာ သစၥာသြားဆိုတာ။ငိုတဲ့ ဇာတ္ဝင္ခန္း႐ိုက္တာေပါ့ အဲဒီမွာကိုယ္က ဒုတိယေျမာက္ ဇာတ္ကားဆိုေတာ့ ငိုလည္းမငို မ်က္ရည္လည္း မက်တတ္ဆိုေတာ့ ဦးေက်ာ္ဟိန္းက ကြၽန္ေတာ့္ကို မင္းေတာ္ေတာ္ ရွက္ဖို႔ေကာင္းတာပဲတဲ့။ ငါ့ကို ေတာ္ေတာ္ အရွက္ခြဲတယ္၊ မင္းတို႔ ညီအစ္ကို ႏွစ္ေယာက္ ငါနဲ႔လည္း ဘာမွ မေတာ္ဘူး၊ ငါ့ အိမ္လာစရာလည္း မလိုဘူး၊ ငါ့ကို အရွက္ ခြဲရက္တယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ သူ စီးတဲ့ ဖိနပ္နဲ႔ ကြၽန္ေတာ့္ ပါးကို႐ိုက္တယ္။ကြၽန္ေတာ္လည္း ရႈိက္ႀကီးတငင္ငို၊ အဲဒီလူႀကီးကိုသတ္မယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ သခ်ိဳင္းေျမကိုလည္း လက္သီးေတြနဲ႔ထိုး လက္ေတြလည္းေပါက္ၿပဲေနတာပဲ။ သူလိုခ်င္တဲ့ Mood လည္း ရလည္းရေရာ ကဒ္ ဆိုၿပီးျဖစ္ေရာ။ အဲဒီမွာ ကြၽန္ေတာ့္ ပုခုံးကို လာဖက္ၿပီး မင္းေတာ္သားပဲ ဘာညာနဲ႔ေပါ့ ခုနက စိတ္ဆိုးထားတာက စိတ္ပဲ ဆက္ဆိုးရမလိုလို၊ဂုဏ္ပဲ ယူေနရမလိုလို” ဆိုၿပီးေတာ့ သေဘာက်ရယ္ေမာရင္း ေျပာျပလာပါတယ္။
ကိုသားညီကေတာ့ သူနဲ႔ ဦးေက်ာ္ဟိန္း အကိုျဖစ္သူေဒြးတို႔နဲ႔ အမွတ္တရေတြကို ျပန္ေျပာင္းေျပာျပထားခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္မွာေတာ့ သားညီဟာ ဒါ႐ိုက္တာအလုပ္ကိုေဇာက္ခ်လုပ္ကိုင္ၿပီး အကိုျဖစ္သူနဲ႔ ဦးေလးျဖစ္သူရဲ႕ ေျခရာကို နင္းႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္ ပရိသတ္ႀကီးေရ….
တိုက်ချက်လန်ထွက် CCTV ကိုသာ ကြည့်လိုက်တော့…(ရုပ်သံ) (မသိရင် နိုင်ငံခြားအက်ရှင်ကားထဲကလားတောင် ထင်ရပါတယ်…)
သရဏဂုံ သုံးပါးကို အမြဲမပျက်ရွတ်ဆိုပွားများသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့ ရရှိနိုင်သောအကျိုးတရားများ
သွေးတိုးရောဂါရှင်တွေ လိုက်နာရန် နှင့် ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန် အချက်များ
ယုန်လေးရဲ့ သီချင်းဗီဒီယိုဖိုင် Share ခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကို ရဲဝင့်ပွင့်လင်းစွာ ပြောပြခဲ့တဲ့ မိုးယံဇွန်
“သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာတော် ကြီးအား ဂါထာစွမ်းအား သတ္တိရရှိလာအောင် လိုက်လာအောင် ရွတ်ဆိုနည်း”
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရဲ့ ကိုယ်ရံတော် ချယ်ရီထက်ကို အားကျလို့ ရိုက်ကူးဖြစ်တာပါလို့ဆိုလာတဲ့ ထားထက်ထက်